ဈေးဆိုင် ၊အိမ်ဆိုင် ၊အွန်လိုင်းရှော့ ဈေးသည်မှန်သမျှ ဈေးတအားရောင်းကောင်းစေတဲ့ ယတြာ… – မြန်မာသတင်းစုံ
ဈေးဆိုင် ၊အိမ်ဆိုင် ၊အွန်လိုင်းရှော့ ဈေးသည်မှန်သမျှ ဈေးတအားရောင်းကောင်းစေတဲ့ ယတြာ…
Posted on December 23, 2020 Author admin	Comments Off on ဈေးဆိုင် ၊အိမ်ဆိုင် ၊အွန်လိုင်းရှော့ ဈေးသည်မှန်သမျှ ဈေးတအားရောင်းကောင်းစေတဲ့ ယတြာ…
ဈေးဆိုင် အိမ်ဆိုင် အွန်လိုင်းရှော့ အပါအဝင် ဈေးသည်မှန်သမျှ ဈေးရောင်းကောင်းစေတဲ့ ယတြာအစီအရင်
ဈေးဦးတောင် မပေါက်သော ၊အရောင်းအဝယ်အရမ်းကိုခက်ခဲ နေသော ရောင်းကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ အတွက်
လက်တွေ့သိသိသာသာ ရောင်းကောင်း ဈေးဦးပေါက်စေသော ယတြာလေးတစ်ခု ပြောပြမယ်။
ကုန်စုံဆိုင်၊ ဆိုင်ထိုင် ရောင်းသောသူဖြစ်စေ ၊ဆိုင်ခန်းမရှိ ကား ၊လှည်း သို့မဟုတ် လူကိုယ်တိုင်
လှည့်လည် ရောင်းချရသောသူ၊Online Shopping ၊ Live shopping အရောင်းအဝယ်သမားများ အားလုံး
ယတြာကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့ပြုလုပ်သော မည်သူမဆို
ချက်ချင်းလက်ငင်းသိသိသာသာ ရောင်းဝယ်ကောင်းလာတာကိုလည်း တွေ့မြင်နေရပါသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးကို သကြားဖြူး၍ စားလိုက်ပါ။
တနင်္လင်္ာနေ့တွင် ဇီးထုတ် ၊ဇီးသီး မိမိအဆင်ပြေတာတစ်ခုကို စားသုံးပါ။
အင်္ဂင်္ါနေ့တွင် ရှောက်ယို၊ရေနွေး မိမိအဆင်ပြေတာကို စားသုံးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မြေပဲကြော် ၊ပဲပြားကြော်၊ဘဲဥ မိမိအဆင်ပြေတာတစ်ခုကို စားသုံးပါ။
ကြာသပတေးနေ့တွင် သာကူ၊သကြား၊သွေးဆေး မိမိအဆင်ပြေတာတစ်ခုကို စားသုံးပါ။
သောကြာနေ့တွင် ထန်းလျက်၊နွားနို့ ၊နို့မလိုင်၊ မိမိအဆင်ပြေတာတစ်ခုကို စားသုံးပါ။
စနေနေ့တွင် အုန်းသီးပေါင်မုန့် ၊အုန်းသီးဘိန်းမုန့် ၊အာလူးကြော် မိမိအဆင်ပြေတာတစ်ခုကို စားသုံးပါ။
ထို့အပြင် (နမောတဿ ယတောမဟိ ၊ဟိမတောယ ဿတမောန )ဂါထာ ကိုမိမိတတ်နိုင်သော
ငွေစက္ကူတရွက် ပေါ်တွင်ရေးပါ။ ရေးထားသော ငွေစက္ကူကို အလှုမင်္ဂလာယပ်တောင် သို့မဟုတ် ယပ်တောင်အသစ် တစ်ခုတွင်ကပ်ပါ။
မှတ်ချက် နာရေးယပ်တောင်ကို လုံးဝအသုံးမပြုရပါ။ ထို့နောက် အထက်တွင် ပေးထားသော
နေ့အလိုက်အစားအစာများကို စားသုံးပြီး ငွေယပ်တောင်လေးနှင့် မိမိရောင်းချမည့်
အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများကို ၂၄ချက် ခပ်ခပ်ပြီး အမြန်ရောင်းကောင်းပါစေဟု ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီယတြာလေးကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ရောင်းကောင်းလာတာကို တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အရောင်းအဝယ်သမားများအကုန်လုံး စီးပွားလာဘ်လာဘ အမြန်ချက်ချင်း ပွင့်လန်းကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
စြေးဆိုငျ အိမျဆိုငျ အှနျလိုငျးရှော့ အပါအဝငျ စြေးသညျမှနျသမြှ စြေးရောငျးကောငျးစတေဲ့ ယတွာအစီအရငျ
စြေးဦးတောငျ မပေါကျသော ၊အရောငျးအဝယျအရမျးကိုခကျခဲ နသေော ရောငျးကုနျပစ်စညျးမြိုးစုံ အတှကျ
လကျတှသေိ့သိသာသာ ရောငျးကောငျး စြေးဦးပေါကျစသေော ယတွာလေးတဈခု ပွောပွမယျ။
ကုနျစုံဆိုငျ၊ ဆိုငျထိုငျ ရောငျးသောသူဖွဈစေ ၊ဆိုငျခနျးမရှိ ကား ၊လှညျး သို့မဟုတျ လူကိုယျတိုငျ
လှညျ့လညျ ရောငျးခရြသောသူ၊Online Shopping ၊ Live shopping အရောငျးအဝယျသမားမြား အားလုံး
ယတွာကို ပွုလုပျနိုငျပါသညျ။ လကျတှပွေု့လုပျသော မညျသူမဆို
ခကျြခငျြးလကျငငျးသိသိသာသာ ရောငျးဝယျကောငျးလာတာကိုလညျး တှမွေ့ငျနရေပါသညျ။
တနင်ျဂနှနေတှေ့ငျ ငှကျပြောသီး တဈလုံးကို သကွားဖွူး၍ စားလိုကျပါ။
တနင်ျလင်ျာနတှေ့ငျ ဇီးထုတျ ၊ဇီးသီး မိမိအဆငျပွတောတဈခုကို စားသုံးပါ။
အင်ျဂင်ျါနတှေ့ငျ ရှောကျယို၊ရနှေေး မိမိအဆငျပွတောကို စားသုံးပါ။
ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျ မွပေဲကွျော ၊ပဲပွားကွျော၊ဘဲဥ မိမိအဆငျပွတောတဈခုကို စားသုံးပါ။
ကွာသပတေးနတှေ့ငျ သာကူ၊သကွား၊သှေးဆေး မိမိအဆငျပွတောတဈခုကို စားသုံးပါ။
သောကွာနတှေ့ငျ ထနျးလကျြ၊နှားနို့ ၊နို့မလိုငျ၊ မိမိအဆငျပွတောတဈခုကို စားသုံးပါ။
စနနေတှေ့ငျ အုနျးသီးပေါငျမုနျ့ ၊အုနျးသီးဘိနျးမုနျ့ ၊အာလူးကွျော မိမိအဆငျပွတောတဈခုကို စားသုံးပါ။
ထို့အပွငျ (နမောတဿ ယတောမဟိ ၊ဟိမတောယ ဿတမောန )ဂါထာ ကိုမိမိတတျနိုငျသော
ငှစေက်ကူတရှကျ ပျေါတှငျရေးပါ။ ရေးထားသော ငှစေက်ကူကို အလှုမင်ျဂလာယပျတောငျ သို့မဟုတျ ယပျတောငျအသဈ တဈခုတှငျကပျပါ။
မှတျခကျြ နာရေးယပျတောငျကို လုံးဝအသုံးမပွုရပါ။ ထို့နောကျ အထကျတှငျ ပေးထားသော
နအေ့လိုကျအစားအစာမြားကို စားသုံးပွီး ငှယေပျတောငျလေးနှငျ့ မိမိရောငျးခမြညျ့
အမြိုးမြိုးသောကုနျပစ်စညျးမြားကို ၂၄ခကျြ ခပျခပျပွီး အမွနျရောငျးကောငျးပါစဟေု ဆုတောငျးလိုကျပါ။
ဒီယတွာလေးကို ယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ ပွုလုပျဆောငျရှကျကွညျ့လိုကျပါ။ ရောငျးဝယျဖောကျကား ရောငျးကောငျးလာတာကို တှမွေ့ငျရပါလိမျ့မယျ။
အရောငျးအဝယျသမားမြားအကုနျလုံး စီးပှားလာဘျလာဘ အမွနျခကျြခငျြး ပှငျ့လနျးကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုအပျပါသညျ။
( အောက်ပါအကြောင်းအရာများသည်ဖြစ်ရပ်မှန်မှုခင်းများကိုပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသောကြောင့်စိတ်မခိုင်သူများနှင့်အသက်၁၈နှစ်အောက်များဖတ်ရန်မသင့်ကြောင်းသတိပေးအပ်ပါသည်။) လွန်ခဲ့သော၂၀၀၈ခုနှစ်တွင်ထောင်ဒဏ်၁၂နှစ်အပြစ်ပေးခံရသောဂျိုဒိုဆွန်း(Cho Doo-Soon) ဆိုသည့်အသက်၅၆နှစ်အမျိုးသားကြီးသည်များမကြာမီ၂၀၂၀ဆိုလျှင်ထောင်ကလွတ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်Cho သည်အသက်၆၈နှစ်အဘိုးကြီးဖြစ်နေပေတော့မည်။သူသည်ယခုထောင်ထဲတွင်ကျန်းမာရေးလည်းသိပ်မကောင်းဟုသတင်းရသည်။ထိုအသက်၇၀နားကပ်နေတော့မည့်အဘိုးကြီးထောင်မှပြန်လွတ်လာတော့မည်…။ ဒါကိုတောင်ကိုရီးယားပြည်သူတို့ကမကြည်ဖြူကြပါ..။ယခုတလောထိုအဘိုးကြီးအကြောင်းကိုလူတွေကပြောနေကြသည်။“ထောင်ထဲမှာတသက်လုံးနေရမှာ..”” ဟင်… မသေသေးဘူးလား!?!”” ဘုရား..ဘုရား… မိစ္ဆာကောင်ကြီးကိုကျွန်မတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကိုပြန်မထည့်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်…”တောင်ကိုရီးယားအင်တာနက်လူထုကြီး(Netizen) မှမကျေနပ်သူများအတော်များနေသည်။ အပိုင်းတစ်– ( သမီးလေးခံစားချက်) ကျွန်မအသက်ရှင်နေရတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လှပါပြီ…။ကျွန်မမှာသူငယ်ချင်းရယ်လို့မရှိပါဘူး။ရည်းစားရှိဖို့အိမ်ထောင်ကျဖို့ဆိုတာအိမ်မက်တောင်မမက်ရဲတဲ့ဘဝပါ..။မစင်အနံ့အမြဲနံစော်နေတဲ့ကျွန်မကိုဘယ်သူကသူငယ်ချင်းလုပ်မှာလဲ…?ဘယ်သူကရည်းစားတော်ချင်မှာလဲ..? ကျွန်မဟာလူကြားထဲမှာတောင်မသွားလာရဲခဲ့ပါဘူး။စာတတ်ချင်လွန်းလို့သာကျောင်းဆက်တက်နေရပါတယ်။ကျွန်မအတွက်တော့အမြဲသိမ်ငယ်နေမိတယ်..။ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အမြဲဝေးဝေးနေမိတယ်။ကျွန်မဆီကအနံ့ဆိုးတွေအတွက်ကျွန်မရှက်တယ်…။အားနာတယ်..။ ကျွန်မအိမ်သာတွေကိုကြောက်တယ်။ကျွန်မအိမ်ကအိမ်သာကလွဲပြီးတခြားအပြင်ကအိမ်သာတွေထဲမဝင်ခဲ့တာ၁၀နှစ်လောက်ကြာပေါ့…။ဟုတ်ပါတယ်..။ကျွန်မဟာအိမ်သာသွားပြီးအညစ်အကြေးစွန့်ဖို့အင်္ဂါမရှိတဲ့ဒုက္ခိတတစ်ယောက်ပါ..။ကျွန်မသွားလေရာဆီး/မစင်အိတ်ခါးဘေးမှာချိတ်ထားရတယ်လေ..။ဆောင်းတွင်းဆိုရင်အင်္ကျီအထူကြီးတွေဝတ်တော့ဒီအိတ်တွေချိတ်ထားတာလူမမြင်တော့ဘူးပေါ့..။ဒါပေမဲ.. နွေရာသီပူပူလောင်လောင်ကြီးမှာအကျီအပွအထူကြီးတွေဝတ်ရတာကျွန်မအတွက်အဆင်မပြေလှဘူး..။ဒါကြောင့်ကျွန်မနွေရာသီတွေကိုလည်းကြောက်တယ်…။ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကဘဝပြန်ရချင်တယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုဒီလိုမစင်အိတ်ခါးမှာချိတ်စရာမလိုဘူး..။ကျွန်မဟာမွေးရာပါဒုက္ခိတမဟုတ်ပါဘူးရှင်..။အဲဒီတုန်းကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြေးလွှားလို့ရပါတယ်။သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်..။ဒါပေမယ်…ကျွန်မဘဝဟာအသက်၈နှစ်မပြည့်ခင်အထိပဲပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၁၁ရက်နေ့သမီး…ပထမတန်းကျောင်းသူအရွယ်တုန်းကပေါ့။ချမ်းအေးလှတဲ့ဒီဇင်ဘာလကြီးမှာသမီးကျောင်းတက်ဖို့အိမ်ကထွက်လာခဲ့တယ်။မနက်၈နာရီ၃၀မိနစ်ပေါ့..။သမီးတို့ကျောင်းသွားရင်ခရစ်ယာန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဖြတ်သွားရတယ်..။ ခရစ်ယာန်ကျောင်းနားမှာအဘအရွယ်လူကြီးတစ်ယောက်သမီးအရှေ့ကိုလာရပ်ပါတယ်။“နင်ဒီခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမတက်ဘူးလား” “ဟင့်အင်း” “ ဘုရားကျောင်းတက်ရမယ်။” အဘကြီးဟာသမီးရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ပြီးအိမ်သာထဲလိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားတယ်။အဘကြီးဟာသူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်တယ်။ပြီးတော့သမီးမလုပ်ချင်တာတွေကိုခိုင်းပါတော့တယ်..။သမီးရွံတယ်။ပြီးတော့သမီးကြောက်တယ်..။သမီးအော်တော့အဘကြီးကပါးစပ်ပိတ်ထားတယ်..။သမီးမျက်နှာတွေကိုရိုက်တယ်။ သမီးကိုလည်ပင်းညှစ်တယ်..သမီးအသက်ရှုလို့မဝတော့ဘူး..။သမီးခေါင်းတွေအရမ်းမူးလာတယ်..။သမီးမျက်နှာတွေလည်ပင်းတွေနာတယ်…။သမီးနာလွန်းလို့သတိရလိုက်… မရလိုက်ပါပဲ..။နောက်ဆုံးမှတ်မိတာကအဘကြီးကသမီးမျက်နှာတခုလုံးအိမ်သာခွက်ထဲကိုအတင်းထည့်ပြီးဖိထားတယ်။အိမ်သာရေဆိုးတွေကသမီးရဲ့နှာခါင်းနဲ့ပါးစပ်ထဲကိုဝင်လာတယ်။သမီးဘာကိုမှမမှတ်မိတော့ဘူး။ သမီးသတိရတော့အိမ်သာထဲမှာပါပဲ..။ဆောင်းရာသီဆိုတော့ချမ်းလိုက်တာ..။သမီးအင်္ကျီတွေဘောင်းဘီတွေသမီးကိုယ်မှာမရှိဘူးထင်ပါရဲ့…။ချမ်းလိုက်တာသေမတတ်ပါပဲ…။“အမေရေ… အဖေရေ… သမီးကိုလာကယ်ပါ” အော်ဟစ်မိတယ်။ သမီးတကိုယ်လုံးလှုပ်လို့မရတော့ဘူး။လှုပ်ရင်အရမ်းနာတယ်။လှုပ်ဖို့လဲအားမရှိပါဘူး။သမီးခေါင်းတွေမူးလာပြီးဘာမှမသိတော့ပြန်ဘူး..။သမီးသတိရတော့ဆေးရုံမှာပါ…။သမီးအဖေနဲ့အမေကိုပြန်တွေ့ရပါပြီ..။ဟင်.?!?.သမီးဗိုက်ကနေဖောက်ထားတဲ့ပိုက်တန်းလန်းကြီးနဲ့…။နာကျင်လှပေမယ့်သမီးမကြောက်တော့ပါဘူး..။သမီးအဖေကပြုံးပြီးပြောတယ်။ “သမီးနေကောင်းသွားမှာပါ..” တဲ့ဒါပေမယ့်အဲဒီအချိန်ကစပြီးသမီးပြန်မကောင်းတော့ပါဘူး။သမီးမှာဆီးသွားဖို့နဲ့မစင်စွန့်ဖို့အင်္ဂါတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။သမီးဒုက္ခိတဖြစ်သွားပါပြီ။သမီးခန္ဓာကိုယ်ကအညစ်အကြေးတွေဟာသမီးဗိုက်ထဲမှာထည့်ဆက်ထားတဲ့ဆီးပိုက်မစင်ပိုက်တို့ကတဆင့်သမီးခါးမှာချိတ်ထားတဲ့အိတ်ထဲကိုတစက်ခြင်းကျနေပါတယ်။အနံ့တွေကလည်းတအားဆိုးပါတယ်။ အပိုင်းနှစ် Cho ဆိုသည့်အသက်၅၆နှစ်အရွယ်မုဒိမ်းသမားသည်ကလေးမလေးအားဆံပင်မှဆွဲ၍မျက်နှာအားအိမ်သာခွက်ထဲနှစ်ထားလိုက်သည်။ကလေးမလေးသတိမေ့သွားသည်။ပို၍သေချာစေရန်ထိုကလေးမလေးအားထပ်၍လည်ပင်းညှစ်လိုက်သည်။ကလေးမလေးပျော့ခွေ၍သွားသည်။အိမ်သာအဖုံးကိုပိတ်၍ကလေးမလေးအားပစ်တင်လိုက်သည်။ထို့နောက်မြေးအရွယ်ကလေးလေးအားCho သည်မုဒိမ်းကျင့်သည်။သူသည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမုဒိမ်းကျင့်သည်။ ကလေးမလေး၏ဦးခေါင်းနှင့်ပုခုံးသည်အိမ်သာရေအိုးနံရံနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဆောင့်မိ၍ပြင်းထန်သောဒါဏ်ရာရကာသွေးများဒလဟောစီးကျလာသည်။ကလေးမလေး၏အညစ်အကြေးစွန့်အင်္ဂါများအားလုံးစုတ်ပြတ်သွားပြီးသွေးအလိမ်းလိမ်းဖြင့်ကလေးမလေး၏အူများထွက်ကျလာသည်။ကလေးမလေး၏သားအိမ်လမ်းကြောင်းနှင့်အစာဟောင်းလမ်းကြောင်းကြားရှိနံရံအားလုံးပွင့်သွားသည်။ Cho သည်အိမ်သာထဲရှိတစ်ရှုးများပိတ်ဆို့လျှင်စုပ်ယူဖယ်ရှားသည့်ရော်ဘာစုပ်တံခွက်ဖြင့်ကလေးမလေး၏အူများကိုအပြင်ရောက်အောင်စုပ်ထုတ်လိုက်သည်။ထိုအူများအပေါ်တွင်သူ၏သုတ်ရည်များသက်သေအဖြစ်ကျန်ရှိနေမှာစိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။အူများထွက်နေသည့်ကလေးမ၏ခန္ဓာကိုအိမ်သာရေထဲနှစ်၍အိမ်သာခွက်ရှိရေဖြင့်ဆေးသည်။ထိုနောက်အူများကိုဗိုက်ထဲပြန်ထိုးသွင်းလိုက်သည်။အူများကပြန်ကျလာသည်။ ကလေးမလေးအားပက်လက်အနေအထားပြုလုပ်လိုက်သည်။အူများကိုပြန်သွင်းသည်။သည်တကြိမ်တွင်အူများထွက်မကျတော့…။“ပြေးမှ..”Cho သည်ကလေးမလေးအားတစ်ချက်ကြည့်၍ပြေးရန်ပြင်ဆင်သည်။သို့သော်သူ၏တိရိစ္ဆာန်စိတ်ရမက်ကြောင့်မပြေးနိုင်…ဗိုက်ပွင့်၍သေလုမြောပါးဖြစ်နေသောကလေးမလေးအားရက်စက်စွာထပ်၍မုဒိမ်းကျင့်လေသည်။ ထို့နောက်ချမ်းအေးလှသောဆောင်းရာသီတွင်အူများနှင့်တကွတကိုယ်လုံးကိုဘေးရှိဘုံဘိုင်ရေအေးဖြင့်အထပ်ထပ်အခါခါဆေးသည်။သူ၏ခြေရာလက်ရာများကျန်ခဲ့မည်စိုး၍ဖြစ်သည်။ကလေးလေးအားအိမ်သာပေါ်ထိုင်ရက်အနအထားထိုင်စေသည်။ထို့နောက်အိမ်သာထဲမှထွက်လာခဲ့သည်။မကြာမီပင်အိမ်သာတက်သူများကရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားသောကြောင့်ရဲကားဆေးရုံကားများရောက်လာကကလေးမလေးအားအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုများချက်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကလေးလေး၏အူများအပိုင်းပိုင်းပြတ်ကုန်သည်။ရေမသန့်သောကြောင့်ပိုးဝင်၍အခြေအနေဆိုးကုန်သည်။ကလေးမလေး၏အောက်ပိုင်းအင်္ဂါအားလုံး၏၈၀% အားလုံးဝဖယ်ရှားဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့ရသည်။ အပိုင်းသုံး ၂၀၀၈ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၁၃ရက်နေ့ကလေးမလေး၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆေးကြောခဲ့သော်လည်းသဲလွန်စများကျန်နေခဲ့သည်။၂ရက်အကြာတွင်Cho ကိုဖမ်းမိခဲ့သည်။Cho သည်ဘယ်သောအခါမှနောင်တရမည့်သူမဟုတ်။လူစိတ်ပျောက်နေသူဖြစ်သည်။အပြစ်ဒါဏ်ကျခံရမည်စိုး၍အမျိုးမျိုးလိမ်ခဲ့သည်။သူ့အမှားကိုမဝန်ခံခဲ့ပါ..။ ” ကျွန်တော်မသိဘူး”“ဒါဆိုအိမ်သာထဲကခင်ဗျားခြေရာတွေကရော..။ဒီမှာခင်ဗျားဖိနပ်..။ခင်ဗျားခြေရာတထပ်တည်းပဲ…”ထိုအခါစကားပြောင်း၍ထပ်လိမ်သည်။“ကျွန်တော်အိမ်သာတက်မလို့သွားတော့အိမ်သာထဲကလူတယောက်ပြေးထွက်လာတယ်..ကျွန်တော်လဲကလေးမလေးလဲနေတာတွေ့ပြီးအမှုပတ်မှာစိုးလို့ပြန်ထွက်လာခဲ့တာ..။ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ခြေရာကျန်ခဲ့တာပေါ့” “ဒီဟာခင်ဗျားခြေအိတ်..! ကလေးမလေးရဲ့သွေးတွေ..”“ဪသွေးတွေနင်းမိတယ်ထင်ပါရဲ့…”ထိုလူမဆန်သောလူယုတ်မာCho သည်အကြိမ်ကြိမ်လိမ်နေသောကြောင့်ဆေးရုံတွင်ဆေးကုသခံနေရသောကလေးမလေးအားတရားရုံးအထိခေါ်စစ်ရသောအနေအထားရောက်လာသည်။ကံကြမ္မာသည်သူမလေးအတွက်ရက်စက်ပေစွ…။တရားရုံးတွင်မိမိမုဒိမ်းကျင့်ခံရကြောင်းကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောရသောအဖြစ်ထက်ဆိုးတာရှိပါဦးမည်လား။ “သမီးကိုမအော်နဲ့တိတ်တိတ်နေလို့ပြောခဲ့လို့မျက်နှာမှတ်မိနေပါတယ်”“အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေ့ရင်လက်တဖက်မြှောက်ပြပါ”ထောက်လှမ်းရေးတို့ကမုဒိမ်းကောင်များ၏ဓာတ်ပုံ၉ပုံပြ၍ရွေးစေသည်။ကလေးမလေးသည်လူယုတ်မာCho အားရွေးချယ်ပြခဲ့သည်။ ၈နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးသည်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်မကြားဝံ့မနာသာမေးခွန်းများကိုဖြေနေရသည်။သူမဖြေကြားရသောအဖြေများသည်သူမဘဝတွင်စိတ်ဒါဏ်ရာအကြီးအကျယ်ရစေခဲ့သည်..။တရားရုံးတွင်ကလေးမလေးအားCho ၏မျက်နှာကိုမတွေ့စေရန်နံရံများပြုလုပ်၍ကာပေးခဲ့သည်။(ကလေးမလေးအားတရားရုံးတွင်လူယုတ်မာCho နံဘေး၌ရှိနေသည်ကိုအသိမပေးခဲ့ပါ..) သို့သော်ကလေးမလေးက“အဲဒီအဘမှာဆံပင်ဖြူမရှိဘူး” ဟုပြောခဲ့သည်။Cho ၏ဆံပင်များကဖွေးဖွေးဖြူနေသည်။ထို့ကြောင့်လူယုတ်မာကြီးကဆက်လိမ်သည်။“ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူး”” ကလေးမလေးအူမကြီးထဲမှာခင်ဗျားရဲ့သုတ်ရည်တွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်..ဘာငြင်းဦးမလဲ?” ထိုစဉ်ကတောင်ကိုရီးယားတွင်DNA Test မရှိသေး၍နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့စစ်ဆေးရသဖြင့်အချိန်ကြာခဲ့သည်။) ဆံပင်နှင့်ပတ်သက်၍လည်းထိုအချိန်ကဆံပင်အမည်းဆေးဆိုးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ထိုအခါလူယုတ်မာလူလိမ်Cho က“ကျွန်တော်မူးနေလို့မမှတ်မိပါဘူး” ဟုဖြေသည်။ကလေးမလေးကလည်း” အရက်စော်နံပါတယ်” ဟုဖြေခဲ့သည်။ အရက်သောက်၍လူမှန်းမသိသောသူသည်ထိုသို့သဲလွန်စများကိုဖျောက်ပစ်နိုင်မည်လား? သတိတရားရှိနေ၍သာထိုအလုပ်များလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ကလေးမလေးအရက်နံ့ရသည်မှာအခင်းမဖြစ်ပွားခင်ညကသောက်ထားသောအရက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုလူယုတ်မာအားတရားသူကြီး.. နှစ်ဖက်ရှေ့နေအားလုံးကသေဒဏ်သို့မဟုတ်တသက်တကျွန်းကျစေလိုသည်။သို့သော်ထောက်လှမ်းရေးတို့ကလူယုတ်မာCho အရက်သောက်ထားမသောက်ထားကိုဖမ်းမိမိချင်းစစ်ဆေးမှုများမပြုမိခဲ့..၊ကလေးမလေး၏အင်္ကျီစသည်တို့တွင်အရက်နံ့ရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း…၊အခင်းဖြစ်ပွားသောအိမ်သာထဲတွင်အရက်နံ့ရမရစစ်ဆေးခြင်း…တို့ကိုထောက်လှမ်းရေးဖက်မှပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ဒါကိုသိနေသောလူယုတ်မာသည်အကြံဖြင့်အချိန်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေးမလေးဆီမှ“အရက်နံ့ရပါတယ်..” ဟူသောအဖြေသည်လူယုတ်မာCho အားတသက်တကျွန်းမှကယ်ခဲ့လေသည်။၂၀၀၈ခုနှစ်တောင်ကိုရီးယားဥပဒေအရအရက်သောက်ထား၍လူစိတ်ပျောက်နေသဖြင့်ပြုမိသောအမှားအားထောင်ဒါဏ်၇နှစ်နှင့်အထက်သာအပြစ်ပေးခွင့်ရှိသည်။သည်အတိုင်းဆိုတောင်ကိုရီးယားမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ချင်လျှင်အရက်သောက်ရမလိုဖြစ်နေသည်..ဟုပြည်သူများကအပြစ်တင်ကြသည်။တရားသူကြီးကအစွမ်းကုန်အပြစ်ပေးဘို့နည်းလမ်းရှာသော်လည်းထောင်ဒါဏ်၁၂နှစ်သာအပြစ်ပေးနိုင်ခဲ့လေသည်။သူကပြောလိုက်သေးသည်။ “ဒီကလေးမငါပြန်ထွက်လာရင်သိမယ်..။ငါ့ဘဝပျက်အောင်တရားစွဲတဲ့မိသားစု” ထို့ကြောင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဥပဒေသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ထိုဥပေဒေသည်အမှန်တရားအတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်သလိုအဓမ္မများကိုအားပေးနေသောအထောက်အပံ့လည်းဖြစ်သွားနိုင်သည်။တောင်ကိုရီးယားပြည်သူတို့သည်ထိုလူယုတ်မာအားထောင်ထဲမှမလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။ ကလေးမလေး၏အရှက်ကိုကာကွယ်သည့်အနေနှင့်ထိုအဖြစ်အပျက်ကို၂၀၀၈ခုနှစ်သတင်းများ၌မကြေငြာခဲ့ပေ..။၂၀၀၉ခုနှစ်၉လပိုင်း၂၂ရက်နေ့တစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေးမလေးမိသားစုမှမူရင်းနာမည်ပြောင်း၍ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုတနိုင်ငံလုံးအသိပေးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။သူတို့မိသားစု၏စေတနာမှာဤလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်Cho Doo Soon ကဲ့သို့လူယုတ်မာများရှိနေကြောင်းအသိပေးလို၍ဖြစ်သည်။သူတို့သမီးလေး၏အဖြစ်ဆိုးကိုတနိုင်ငံလုံးသိရှိ၍ရင်သွေးငယ်များအားမိဘတို့ကကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မဤဆောင်ပါးကိုရေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှမိဘအုပ်ထိန်းသူများမိမိတို့ရင်သွေးအားအရင်ကထက်ပို၍ဂရုစိုက်စေလို၍ဖြစ်ပါသည်။ဆောင်းပါးမှကလေးမလေး၏ဖခင်သည်အလုပ်ကြမ်းသမားဖြစ်၍မိခင်သည်အိမ်အကူဖြစ်သည်။အလွန်ဆင်းရဲသောကြောင့်သားသမီးအားကျောင်းလိုက်ပို့ရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းဘဝရပ်တည်ရေးအတွက်ဆင်းဆင်းရဲရဲရုန်းကန်အလုပ်လုပ်နေရသောမိဘများများစွာရှိပြီးမိမိတို့သားသမီးတို့အားရင်အုပ်မကွာဂရုမစိုက်နိုင်ကြသည်ကများသည်။ကလေးပျောက်၍ပြန်ရှာမတွေ့တော့သောမိဘများလည်းမကြာခဏကြားနေရသည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည်ရာဇဝတ်မှုနည်းပါးသောလုံခြုံသောနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ရာဇဝတ်အမှုတစ်ခုဖြစ်လာလျှင်သတင်းများများသောအားဖြင့်မထိန်ချန်ပါ..။သတင်းများတွင်ထည့်သွင်းကြေငြာခြင်း၊မှုခင်းTV program များဖြင့်အသိပေးခြင်း၊ရုပ်ရှင်များရိုက်၍ပြည်သူအားသတိပေးခြင်းစသည်ပညာပေးများစွာလုပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနိုင်ငံ၌ပင်ထိုကဲ့သို့အဖြစ်ဆိုးများရှိနေလျှင်…. တရားဥပဒေအပြည့်အဝစိုးမိုးမှုမရှိသော…၊မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသော…၊ငွေကြေးဆင်းရဲ၍သားသမီးတို့အားဂရုမစိုက်နိုင်သော..၊လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပပျောက်မှုမရှိသေးသောမြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့သောနေရာမျိုးတွင်မိမိတို့ရင်သွေးများကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကူညီစောင့်ရှောက်ရုံမှလွဲ၍အခြားနည်းလမ်းမရှိပေ…။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်အထက်ပါအဖြစ်အပျက်တို့ဖြစ်ပြီးသားသမီးတို့အားမူကြိုကျောင်းမှစ၍တစိမ်းသူများနှင့်စကားမပြောရန်အဓိကထား၍ထပ်ခါထပ်ခါပညာပေးခဲ့သည်။” လမ်းပေါ်ကမသိတဲ့ဦးလေးကြီးကမုန့်ကျွေးမယ်ဆိုလိုက်သွားလို့ဖြစ်မလား?” အရေးပေါ်ဝီစီ( whistle ) များကလေးတို့၏လည်ပင်းတွင်ချိတ်ပေးထားခြင်း.. စသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင်၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်Hope ဟူသောရုပ်ရှင်ကားကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ကိုရီးယားအသံထွက်–ဆိုဝန်(소원-Sowon) ဆိုသောရုပ်ရှင်အားဒါရိုက်တာLee Joon-ik ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်Sol Kyung-gu, Uhm […]
သသေူရဲ့ကိုယျစား ကနျြရဈသူဆှမြေိုးတှကေို တဈတဈခှခှ ဆဲပေးရုံနဲ့ ငှဝေငျကွမျးနသေူ
တဈခြို့သောသူတှရေဲ့အလုပျတှဟော ကြှနျတျောတို့ မွငျဖူးကွားဖူးတဲ့ အလုပျမြိုးတှေ မဟုတျတဲ့အတှကျ ထူးခွားကောငျး ထူးခွားနိုငျပါတယျ။ တရုတျမှာဆိုရငျ မသာအိမျတှမှော အငှားလိုကျငိုတဲ့အဖှဲ့တှရှေိပွီး၊ တဈခြို့ကတော့ သသေူ နောငျဘဝကို အကူးကောငျးအောငျ ကောငျမလေးတှရေဲ့ အကအလှတှနေဲ့ ဖြျောဖွတောမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒီလူရဲ့အလုပျကလညျး အမြားအတှကျတော့ ထူးဆနျးပါတယျ။ သူ့အမညျကတော့ Bill Edgar ဖွဈပွီး၊ သွစတေးလနြိုငျငံ၊ Gold Coast မှာ နထေိုငျပါတယျ။ သူဟာ အရငျကတော့ အလှတျစုံထောကျတဈယောကျ ဖွဈခဲ့ပွီး၊ နောကျပိုငျးမှာတော့ အဲဒီထကျပိုပွီး ဝငျငှသေခြောတဲ့ အလုပျတဈခုကို ထငျမှတျမထားဘဲ ရရှိခဲ့ပါတယျ အလုပျကတော့ သသေူရဲ့ကိုယျစား ကနျြရဈသူဆှမြေိူးတှကေို တဈတဈခှခှ ဆဲပေးရတာပါ။ ဒါပမေယျ့ သသေူအပျေါမှာ ကောငျးတဲ့သူတှရှေိရငျလညျး သူက ခြီးမှမျးခနျး ဖှငျ့ပေးရပါတယျတဲ့။ ဒီအလုပျကို သဆေုံးသူ မသခေငျမှာ Bill […]
ယနေ့ ဆန်ဒပွ ပွညျသူတှေ ကြိနျစာရှတျဆိုပှဲ ပွုလုပျသညျ့ ထီးလိုမငျးလို ဘုရား သမိုငျး
ထီးလိုမငျးလိုဘုရား ထီးလိုမငျးလိုဘုရားသညျ မွနျမာနိုငျငံ၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပုဂံရှိ ဂူဘုရားတဈဆူ ဖွဈပွီး ပုဂံ-ညောငျဦးကားလမျးဘေးတှငျ တညျရှိလသေညျ။ ထီးလိုမငျးလိုဘုရားသညျ ကှမျးတောငျပေါကျလိုဏျ သုံးဆငျ့ဂူဘုရား ဖွဈပွီး (၁၈)မတျ(၁၂၀၈) တှငျ ဇယေသြိင်ျခ နားတောငျးမြားမငျး (ထီးလိုမငျးလို) အဒေီ (၁၂၁၁-၁၂၃၁) တညျခဲ့သညျ။ ထီးလိုမငျးလိုဘုရား သမိုငျးအစဉျအလာဆိုကွသညျမှာ ဖခမညျးတျော နရပတိစညျသူမငျးသညျ နတျရှာစံခါးနီး အခြိနျတှငျ သားတျောမြားအနကျ တဈဦးကို နနျးရစခေငျြသညျ။ သို့ရာတှငျ အမြားကနြေပျအောငျဟု သားတျောအားလုံးအလယျတှငျ ထီးဖွူစိုကျကာ မငျးဖွဈထိုကျသူသို့ ထီးဖွူညှတျစသေတညျးဟု အဓိဋ်ဌာနျသျော သူလိုလားသညျ့ နားထောငျးမြားမငျး ဘကျသို့ ထီးဖွူညှတျလသေညျ။ ထိုသို့ ထီးကလညျးလို၊ မငျးကလညျးလို၍ ထီးလိုမငျးလိုမငျးဟူ၍ ချေါတှငျကွသညျဟု ဆိုသညျ။ တဖနျ ထီးဖွူညှတျရာ၌ ဘုရားတညျထားရာ ထီးလိုမငျးလို ဘုရားဟု ချေါတှငျလသေညျဟု ဆိုကွသညျ။ နားတောငျးမြား […]
ကိုယျပိုငျအိမျနဲ့ခွံ ပိုငျဆိုငျသမြှစညျးစိမျဥစ်စာတှကေို နညျးနညျးမှမခနျြပဲ ရှိသမြှအကုနျလှူဒနျးလိုကျတဲ့ မန်တလေးကအဖှားအို